Ardublock: chii icho uye zvazvinogona kuitira yako Arduino | Mahara emahara
Ardublock: Chii Chaicho Uye Izvo Chainogona Kuitira Yako Arduino
Kuwanikwa kwemabhodhi eArduino ndechimwe chinhu chisingachashandi uye chiri kuwedzera mukati mehomwe dzakawanda, asi zvinoshanda sei? Zviri pachena kuti kuti rishande tinoda kodhi kana chirongwa chinoita mashandiro atinoda. Izvi, zvinosuruvarisa, hazviwanikwe kune wese munhu uye ndizvo iwe unoda kuronga ruzivo kuti Arduino ifambise mota kana kubatidza mwenje.
Zvese izvi zvagadzira edhisheni edhita uye yekuona zvirongwa zvakanyanya kufarirwa. Rudzi urwu kuronga kunokutendera kuti iwe ugadzire zvirongwa kuburikidza nemabhuroko anodhonzwa negonzo, Kukanganwa kuvhara dzakamonerwa brace kana kuita kunyora kwenguva refu basa mazita. Chishandiso chakakurumbira chinounza chirongwa chekuona kuArduino chinonzi Ardublock.
1 Chii chinonzi Ardublock?
2 Maitiro ekuisa Ardublock mune yedu yekushandisa system?
2.1 Kugadzirira kwekombuta yedu
2.2 Kuiswa kweArdublock
3 Dzimwe nzira kune Ardublock
Chii chinonzi Ardublock?
Ardublock chirongwa kana pachinzvimbo chinoenderana neArduino IDE iyo inotibvumidza kuti tigadzire mapurogiramu nekodhi pasina chikonzero chekunyora kodhindiko kuti, kuburikidza nematurusi ekuona. Izvi zvine zvazvakanakira nekuti kana isu tichiziva maitiro ekuronga, isu tinochengetedza yakawanda nguva mukugadzirisa maitiro nekuti isu tisingazokanganwe kunyora inozivikanwa ";" uye haivhare iyo kodhi brace. Zvirongwa zvine maturusi ekuona zvirongwa yakagadzirirwa vese novice uye nyanzvi programmers uye zvakare kune vashandisi vasingazive maitiro uye vanoda kudzidza kuzviita.
Sezvatakambotaura, Ardublock yakawanda yemubatsiri pane chirongwa chaicho sezvo zvichidikanwa kuve neArduino IDE yekushanda kwayo. Nekudaro, tichigadzira pfupiso, tinogona kutaura kuti Ardublock ndeyekugadzirisa kweArduino IDE kuchinjisa kodhi purogiramu kuchirongwa chekuona.
Ardublock ine zvimwe zvakanaka zvinhu kunze kwekuve chishandiso cheye novice programmer. Chimwe chezvinhu zvaro zvakanaka mukana we shanda nemabhuroko kugadzira mapurojekiti nekukurumidza.
Ardublock inoshanda zvinoonekwa nemabhuroko uye inogona zvakare kushanda nezvinhu. Nekudaro, isu tinokwanisa kugadzira bhokisi rinova mavhiri, imwe iri mimhanzi uye imwe iri ndiro; pese patinoda kushandisa mabhureki aya tinozotumidza zita kana kungozvuva kubva kudivi rehwindo kuenda kune rimwe divi rehwindo.
Mabasa pamwe nemikana iyo Ardublock inotipa yakafanana neyo Arduino IDE inotipa, ndiko kuti, tinogona kubatanidza Ardublock kubhodhi redu reArduino, kutumira kodhi iyo Ardublock yakagadzira nekuda kwemablock uye kuyedza mapurojekiti edu nekukurumidza uye nyore. Uye ndezvekuti kana tapedza chirongwa, iyo ruzivo rwakachengetedzwa ichiri yakanyorwa kodhi, kodhi iyo Ardublock yakagadzira nematombo edu.
Maitiro ekuisa Ardublock mune yedu yekushandisa system?
Zvakanaka, isu tatoziva kana isu tine yakajeka pfungwa nezve chii Ardublock, asi yakaiswa sei pakombuta yedu? Tingaishandisa sei?
Kugadzirira kwekombuta yedu
Kunyangwe iwo ega magwaro aripo nezve Ardublock ari muChirungu, chokwadi ndechekuti maitiro ekumisikidza ari nyore uye nekukurumidza kana isu tine Arduino IDE. Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa mune yedu Arduino IDE komputa, kana tisina kuiisa, unogona kumira kuti uone pano maitiro ekuiisa pane Gnu / Linux. Chimwe chinhu chatichada ndeche kuva neJava virtual muchina kana zvakafanana muchikwata. Kana isu tikashandisa Gnu / Linux, chakanakira kubheja OpenJDK, kunyanya mushure mekupokana pakati peOracle neGoogle. Zvino zvatave nezvose zvaitwa, isu tinofanirwa kuenda ku iyo yepamutemo Ardublock webhusaiti uye tora iyo Ardublock package, package iri muJava fomati kana neiyo yekuwedzera .jar. Iyo yakadzingwa faira harisi rinoitisa faira ine yekumisikidza wizard, saka isu tinofanirwa kuita zvese nemaoko.
Kutanga Isu tinovhura iyo Arduino IDE uye toenda kune Zvaunofarira kana Zvaunofarira. Iye zvino tinoenda kusarudzo "Sketchbook nzvimbo:" iyo ichaonekwa muhwindo idzva. Iyi ndiyo kero yatinozofanira kuchengetedza mamwe mapulagini kana zvinhu zveArduino IDE. Nzvimbo kana kero inoonekwa ichave yakaita se "Zvinyorwa / Arduino" kana imba / Zvinyorwa / Arduino. Tinogona kuchinja kero asi kana tikachinja isu tinofanirwa kuziva kuti ndeipi kero nyowani yekufambisa iyo yakadzingwa Ardublock faira ipapo. Kana isu tikazarura iyo Arduino dhairekitori tichaona kuti kune mamwe maforodha madiki uye mafaera.
Isu tinofanirwa kufambisa iyo Ardublock package tichisiya inotevera kero "zvishandiso / ArduBlockTool / chishandiso / ardublock-all.jar". Kana isu tine chirongwa cheArduino IDE chakavhurwa, inguva yekuivhara uye kana tavhura zvakare, mukati meMathuluzi kana Zvishandiso menyu iyo Ardublock sarudzo ichaonekwa. Kudzvanya pairi kunounza hwindo idzva rinoenderana neArdublock interface. Sezvauri kuona, icho chinhu chiri nyore uye chinokurumidza asi chinovhiringidza kana tisingazive maitiro ekumisikidza.
Dzimwe nzira kune Ardublock
Kunyangwe Ardublock ingaite senge chimwe chinhu chitsva uye chakasarudzika kuna Arduino, chokwadi ndechekuti haisi iyo yega chirongwa kana chishandiso chatinofanira kuita chirongwa chekuona. Kune zvishandiso zvakati wandei zvinotarisa pane zvinoonekwa zvirongwa, kusvika padanho rekuti dzimwe nzira dzese dzeArdublock zvirongwa zvakasarudzika uye kwete zvinowedzerwa kana plugins kuArduino IDE.
Yokutanga yesarudzo idzi inonzi Minibloq. Minibloq chirongwa chakazara chinotarisa pakurongwa kwekuonaNekudaro, skrini yaro yakakamurwa kuita zvikamu zvitatu: chikamu chine mabhuroko anofanira kugadzirwa, chimwe chikamu chatinofambisa mabhuroko atinoda kushandisa muchirongwa uye chikamu chechitatu chinoratidza kodhi yatichagadzira, vashandisi vemberi. Minibloq inogona kuwanikwa kuburikidza neizvi link.
Chishandiso chechipiri chinonzi Tsvaga Arduino. Ichi chishandiso chinoedza chinja chirongwa cheScratch chevana kune chero danho uye neuzivi hwakafanana gadzira zvirongwa. Kukanda kweArduino chirongwa chakazara, sekutaura, forogo yeScratch.
Chechitatu chematurusi hachina kunyatso kusimbiswa parizvino, asi chishandiso chakavimbisa mukati mezvirongwa zvekuona. Chombo ichi chinonzi Modkit, chinhu iyo yakazvarwa paKickstarter asi iri kukura zvishoma nezvishoma munzira yakanakisa. Musiyano kubva kune zvimwe zvirongwa zvinogona inonyanya kuzivikanwa mune vashandisi veavice kupfuura vashandisi vemberi. Chekupedzisira, imwe nzira yeArdublock ichave iri yechinyakare mashandisiro eArduino IDE, imwe nzira isingaoneke uye iyo inongowanikwa kune avo vane hunyanzvi programmers.
Ardublock chishandiso chinonakidza kwazvo, zvirinani kune vashandisi veavice. Asi ichokwadi kuti kana iwe uri nyanzvi programmer, aya marudzi ezvishandiso haigadzi kodhi kuti igadziriswe nekukurumidza asi zvakapesana. Uchishandisa mbeva, oddly zvakakwana, inononoka pane kushandisa iyo keyboard.
Kunyange zvakadaro kana isu tisina ruzivo mapurogiramu kana isu tiri kudzidza, Ardublock inokurudzirwa zvakanyanya kuwedzerwa kwete kutaura kwakakosha nekuti muzvikamu izvi hazvidzivirike kugadzira zvikanganiso zve syntax nematambudziko madiki anonetsa kuwana nekukunda naArdublock. Zvisinei Unosarudza chii?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Ardublock: Chii Chaicho Uye Izvo Chainogona Kuitira Yako Arduino
Oscar Mansila akadaro
Mhoro, ndafara kukuziva. Ardublock inoshanda neshanduro nyowani dzeArduino?
Pindura kuna Oscar Mansila
Mhoroi, Nemifananidzo iyi yakajeka unogona kugadzira zvirongwa zvakafanana nekunyora? Mune mamwe mazwi, kodhi dzese dzakanyorwa dzaigona kuitwa mumabhuroko here?
Mumwe mubvunzo, unotsanangura sei kana kushandisa iyo .h, subroutines nezvimwe. apa?
Maitiro ekuvaka ruoko rwe robotic nemari shoma
Maitiro ekuita nhema detector neArduino